राष्ट्र बैंकको गलत कदम | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय राष्ट्र बैंकको गलत कदम
on: ८ पुष २०७५, आईतवार ०५:२६ सम्पादकीय
राष्ट्र बैंकको गलत कदम
बैंकहरूले ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा मुनि राख्न सहमति गरेका छन् । यसलाई सहमति भनिए पनि यो नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको अप्रत्यक्ष दबाबको परिणाम हो । एक खालको बाध्यता । तर, यो ‘सहमति’मा बैंकहरू कति समय टिक्ने हुन् कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । ‘सहमति’ कार्यान्वयन भएछ नै भने पनि जेका लागि यो कसरत गरिएको हो त्यो उद्देश्य अर्थात् तरलता अभावको समाधान हुने आधार देखिँदैन । अन्य विकल्प नखोजी किन राष्ट्र बैंक यो टालटुले नीतिको पछाडि लागेको होला ?
ब्याजदरको प्रतिस्पर्धा हेर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा छैन । यस्तोमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले नै हस्तक्षेप गरेर ब्याजदरमा सहमति कायम गरायो । यो कार्टेलिङलाई प्रोत्साहन हो ।
बलजफ्ती ब्याजदर कम राख्दा त्यसले वित्त बजारमा नकारात्मक असर पार्छ । ब्याजदरको प्रतिस्पर्धा हेर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा छैन । यस्तोमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले नै हस्तक्षेप गरेर ब्याजदरमा सहमति कायम गरायो । यो कार्टेलिङलाई प्रोत्साहन हो । नेपालले उदार र खुला बजार नीति लिएको छ । यस्तोमा ब्याज दर निर्धारण गर्न काम बजारले नै गर्छ । अर्थात्, ऋणको माग र निक्षेपको आपूर्तिका आधारमा नै ब्याजदर निर्धारण हुन्छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो कामले खुला बजारलाई रोक्न खोजेको देखिन्छ । एकातिर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अहिलेको ऋण माग लगानीका दृष्टिले निकै सकारात्मक रहेको बताएका छन् भने अर्कातिर ऋणको माग घटाउने नीति लिन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिइरहेका छन् । यसले सरकार आफै समस्याको कारण के हो भन्नेमा अस्पष्ट रहेको संकेत दिन्छ ।
ब्याजदर कम गर्न दिइएको दबाबमा व्यापारी उद्यमीहरूले सरकारको ‘कम्युनिस्ट मानसिकता’ छाया देख्ने सम्भावना उत्तिकै टड्कारो छ । यसो भयो भने उदार र बजारमुखी अर्थतन्त्रबाट सरकार नै पछि हट्न खोजिरहेको भनी लगानीकर्ता थप आशंकित हुन सक्छन् । हुन त वित्तीय क्षेत्रमा निकै ठूलो समस्या आयो भने राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने होइन । यस्तो हस्तक्षेप अल्पकालका लागि गर्न सकिन्छ । अल्पकालीन समाधानसँगै दीर्घकालीन समाधान पनि खोजिनुपर्छ । बजारको समस्याको अध्ययन गरी त्यसलाई समाधान गर्नुचाहिँ दीर्घकालीन समाधान हो । अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको मुद्रा तथा पू“जी बजार सुधार कार्यदलका सुझावहरूले धेरै मात्रामा दीर्घकालीन समाधानका उपाय सुझाएको छ । तर, ती पनि धेरै पहिलेदेखि छलफलमा आइसकेका हुन्, नितान्त नयाँ होइनन् । ती उपाय अपनाउनेतर्फ राष्ट्र बैंक किन पहिल्यै लागेन ?
राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप नै गर्ने हो भने कर्जा माग रोक्नुपर्‍यो । ऋणको क्षेत्र र सीमा तोकेर (अर्थात् क्रेडिट रासनिङ गरेर) त्यसो गर्न सकिन्छ । अहिलेको समस्या बैंकहरूले धमाधम कर्जा विस्तार गर्नु हो । पूँजी वृद्धि गरेसँगै बैंकहरूलाई मुनाफा बढी कमाउन दबाब परेको छ । बैंकहरूको मुनाफा हेर्दा अन्य क्षेत्रको भन्दा बढी देखिन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले यसमा सीमा तोक्न सक्छ । मुनाफामा सीमा तोकेपछि ब्याजदर बढाएर कर्जा विस्तारका लागि मरिहत्ते गर्र्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन्छ ।
त्यस्तै बैंकहरूले बाँड्ने लाभांशमा सीमा तोकेर पनि कर्जा विस्तारलाई कम गर्न सकिन्छ । विस्तारकारी कर्जाले समस्या निम्त्याउने भन्दै अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले समेत नेपालको तरलतामा चासो दिएको सन्दर्भमा यस्तो सीमा तोकेर बैंकहरूलाई जसरी पनि नाफा बढी कमाउन कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यता कम गर्न सकिन्छ ।
कार्यदलको प्रतिवेदनले देखाएअनुसार हाल अर्थात् पुसमा बैंकहरूमा अधिक तरलता छ । अर्थात् तरलताको समस्या हठात् उठ्दै हठात् हराउने खालको हो । यस्तो हुन नदिने गरी तरलता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका उपाय नियामक निकायका अघिल्तिर नभएका होइनन् । कार्यदलको संयोजकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक गभर्नर नै भएकाले यसको कार्यान्वयन होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर, के टालटुले र हचुवा नीति छाडेर दीर्घकालीन समाधानतर्फ राष्ट्र बैंकको ध्यान जाला त ? प्रश्न अझै टड्कारै छ ।